ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (ITBMU) – မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆင်းရဲသားပြဿနာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (ITBMU) – မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆင်းရဲသားပြဿနာ
Photo – Irrawaddy Online
(မိုးမခ) အောက်တ်ိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အော်သံတွေ ဆူညံနေ၏။ “ဆင်းရဲသား ပပျောက်ရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ လျှော့ချရေး၊ ပညာရေး မြှင့်တင်ပေးရေး↔ စသည်ဖြင့် ဒီအသံတွေက နေရာတိုင်းမှာလိုလို ကြားနေရ၏။ ဒါတွေ ဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာ အစိုးရပေါ်လစီ ညံ့ဖျင်းလို့၊ ၀န်းထမ်းတွေ လာဘ်စားလို့၊ ခရိုနီတွေ စီးပွားရေး အမြတ် ထုတ်နေလို့ စသည်ဖြင့် တိုင်းပြည်ဆင်းရဲခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ဝေဖန်သံတွေကလည်း မစဲနိုင်အောင်ရှိနေ၏။
ပြည်သူတွေရဲ့ အော်သံများသည် မှန်သင့်သလောက် မှန်နေသော်လည်း ကြောင်းကျိုးယုတ္တိ ခိုင်လုံ သော အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ပါ။ ဆင်းရဲသား ပပျောက်နိုင်ရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ လျှော့ချနိုင်ရေး ဆိုတာ အစိုးရမှာချည်း တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ အစိုးရနှင့်ပြည်သူ တိုင်းပြည်အတွက် အတူလက်တွဲ၍ အလုပ် မလုပ်နိုင်ကြသရွေ့ ဘယ်အစိုးရတက်တက်၊ ဘယ်ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးကျင့်သုံး ဒီပြဿနာတွေက ဆက်လက် ရှိနေဦးမည်သာဖြစ်၏။
တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ (အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ) ဆင်းရဲသားပြဿနာ၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာ၊ ကလေးအလုပ်သမားပြဿနာ၊ တောင်းရမ်းစားသောက်သူများပြဿနာ ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေ များစွာ ရှိနေခြင်းပါ။ ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာ အစိုးရပေါ်လစီ ညံဖျင်း၍လော။ ပြည်သူတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွား အတွက် အတူပူးပေါင်း ပါဝင်မှုများ အားနည်းနေ၍လော။ မေးစရာတွေက များစွာရှိနေခြင်းပါ။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲသားတွေ ပပျောက်သွားအောင် ̏ထမင်းရေချောင်းစီး အလှူကြီးတွေ̋ ပေးနေရုံ မျှနှင့်လည်း ဆင်းရဲသားတွေ ပပျောက်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းရှိ လူတန်းစားများအပေါ် အခွန်တွေ တိုးမြှင့် ကောက်ခံနေရုံမျှနှင့်လည်း ဆင်းရဲသားတွေ ပပျောက်သွားဦးမည်မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရက အလုပ်လက်မဲ့ ဦးရေ နည်းပါးအောင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းတွေ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ဆင်းရဲသားများအား စနစ်တကျ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း၊ စသည်များကို ပြုလုပ်ပေးရုံမျှနှင့်လည်း ဆင်းရဲ့သားတွေ ပပျောက်သွားဦးမည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် မိသားစုတစ်စု ဆင်းရဲနေရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများမှာ များစွာရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်။ အစိုးရပေါ်လစီ ညံဖျင်း၍လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မိဘများ ဘ၀အတွေးအခေါ် အမျှော်အမြင်များ နည်းပါးနေခြင်း၊ အသုံးအဖြုံးများနေခြင်း၊ သားသမီးများကလည်း မလိမ္မာခြင်း၊ မိသားစု၏ ရှေးကုသိုလ်ကံများ ညံ့ဖျင်းခြင်းစသော အကြောင်းများသည်လည်း ဆင်းရဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းများဖြစ်ကြတယ်။
အဖေက ကွမ်းစား၊ ဆေးလိပ်သောက်၊ အရက်သောက်၊ ဖဲရိုက်၊ အပျော်လိုက်၊ လူမှုရေးဖေါက်ပြန်၊ အမေက ချဲထိုး၊ ဖဲရိုက်၊ အသုံးအဖြုံးကြမ်း၊ အလှအပလိုက်စားလွန်းနေမည်ဆိုလျှင် ထိုမိသားစုမျိုးသည် ဆင်းရဲတွင်းမှ ဘယ်သောအခါမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုမိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာသော သားသမီး များသည်လည်း ပညာတတ်ဖို့အခွင့်လမ်းများ နည်းပါးနေမည်သာဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲတွင်းမှ ရုန်းထွက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူ၊ ပြည်သားများအား အသိဥာဏ်များတိုးပွားအောင် အသိတရားများကို တိုးပွား စေနိုင်သော သင်တန်းများကို နိုင်ငံတော်မှဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲ့များမှဖြစ်စေ အခမဲ့ပို့ချပေးခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့် သီလများ ကောင်းမွန်းလာအောင် အားပေးတိုက်တွန်းများကို ပြုပေးသင့်ခြင်းပါ။
အချို့သောမိသားစုများ၌ မိဘနှစ်ပါးက သားသမီးများအတွက် ဘ၀တစ်ခုလုံးကို မြှုပ်နှံ၍ မည်သို့ပင် ပေးဆပ်နေကြပါစေ။ သားသမီးများက မိဘများရဲ့ မေတ္တာ စေတနာတို့ကို တန်ဖိုးမထားပဲ ထင်ရာစိုင်းနေကြမည် ဆိုလျှင် ထိုမိသားစုအတွက် ဘ၀တက်လမ်းဆိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းများကို သားစဉ်မြေးဆက် မရနိုင်အောင် ရှိနေမည်ဖြစ်၏။ ဥပမာ၊ မိဘများက ကြိုးစား၍ ကျောင်းထားပေးသော်လည်း သားများကလည်း ကျောင်းပြေး ကွမ်းစား ဆေးသောက် အရက်သောက်သူများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲများနှင့် အပေါင်းအသင်းလုပ်ခြင်း၊ သမီးများကလည်း ကျောင်းစာ၌ စိတ်မ၀င်စား ကျောင်းပြေး ရှော့ပင်းမောတွေ၌ လျှောက်လည်၊ သူငယ်ချင်း တွေဆီ အချိန်ရှိတိုင်း ဖုန်းဆက်စသည်များကို ပြုလုပ်နေကြမည်ဆိုလျှင် ဒီမိသားစုမျိုးသည် တိုင်းပြည်အတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ ဖြစ်နေနိုင်ခြင်းပါ။ ဒီအခြေအနေတွေကို မိဘများနှင့် တိုင်းသူ၊ ပြည်သားများက အတူပူး ပေါင်း၍ အချိန်မီ မတားဆီးနိုင်ကြလျှင် ထိုမိသားစုများရဲ့ နောင်ရေးသည် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ စိတ်အေးနိုင်းစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ဤသို့သောအခြေအနေများကြောင့် တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေးနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ ဦးရေ လျှော့ချရေး ပြဿနာဟာ သေးသေးကွေးကွေး မဟုတ်ကြောင်း ပညာရှင်များ တွေးဆနိုင်ခြင်းပါ။ ထိုအခြေအနေများကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် အစိုးရနှင့်ပြည်သူ အတူပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်အခါ မျိုးသို့ ဆိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ၊ ပြည်သားများအား အသိပေးလိုခြင်းပါ။
အမေရိကန်လို တိုးတက်ပြီး နိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဆင်းရဲသားလူတန်းစားများ ရှိ မရှိ မေးခဲ့သော်၊ အဖြေကား များစွာရှိနေခြင်းပါ။ အလုပ်လက်မဲ့များ ရှိ မရှိ စိစစ်ခဲ့သော် များစွာတွေ့နိုင်ခြင်းပါ။ တောင်းရမ်းစားသောက်သူများ ရှိ မရှိ မေးလာခဲ့သော် လုံးဝကင်းနေပြီဟုမဆိုနိုင်သေးပါ။
သို့သော် အမေရိကန်ပြည်သူတို့သည် ခြေလက် အင်္ဂါပြည့်စုံလျှက် တောင်းစားနေသူများကို မြင်လျှင် မသနား၍တော့မဟုတ် ပေးကမ်းချင်စိတ်မရှိကြပါ။ မြေအောက်ရထားဘူတာရုံများ၌ တခါတရံ တောင်စားနေသူ များကို တွေ့ရခြင်းပါ။ ထိုတောင်းစားသူများသည် (တစ်ယောက် သို့မဟုတ် နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်စသည် တို့သည်) ဂီတာတီးခြင်း၊ တယောထိုးခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း စသည်များကို ပြုလုပ်ကြ၍ ထိုသူများ၏ ဂီတနှင့် လုပ်အားကို သဘောကြ၍ ပိုက်ဆံများ ပေးကြသည်ကိုမူ မကြာမကြာ တွေ့နေရခြင်းပါ။ သို့သော် ခြေလက်အင်္ဂါ သန်သန်မာမာ ရှိနေပါလျှက်နှင့် အလုပ်မလုပ်လို၍ အချောင်တောင်းစားခြင်းမျိုးကိုမူ အမေရိကန်ပြည်သူတို့က အားမပေးလိုကြပါ။
ရံဖန်ရံခါ မီးပွိုင့်များရှိသော အချို့လမ်းဆုံများ၌ ဟုမ်းမ်လက်စ် (homeless) အိမ်မဲ့အိမ့်မဲ့များသည်၊ (သို့မဟုတ်) ဂျောဘ်လက်စ် (jobless) အလုပ်လက်မဲ့များသည် “၀ီ နိဒ် အေ ဂျော့ဘ် (We needajob) ငါတို့ အလုပ်လုပ်လိုကြသည်။ အလုပ်များ ပေးကြပါ↔ဟူသော ဆိုင်ဘုတ်မျိုးကို ကိုင်ဆောင်လျှက် မီးပွိုင့်ဓာတ်တိုင် များအနီး၌ ထိုင်နေသူများကိုလည်း တခါတရံ တွေ့ရတတ်သည်။ သို့သော် တွေ့ရခဲဘိ၏။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့သူများ၊ ဆွံ့အ နားမကြားသူများ၊ မျက်မမြင် ဒုက္ခိတများ သည် အထူးကံကောင်းကြသူများဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် စောင့်ရှောက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူအများနှင့် ဆက်နွယ်ရသော အဆောက်အဦမှန်သမျှ ထိုဒုက္ခိတများအတွက် ဓာတ်လှေကားများ ထားရှိပေးရသည်။ ဥပမာ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ရုံးများ၊ ဆေးရုံများကို ဆိုလိုသည်။ ပြည်သူအများ သွားလာသော ရထားဘူတာရုံများ၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ်များ၌လည်း ဓာတ်လှေခါးများ ထားရှိပေးရသည်။ ပြည်သူများစီးနင်းသော ဘတ်စ်ကားများ၌သည် ဒုက္ခိတများ စီးနင်းလိုက်ပါနိုင်ဖို့ (သူတို့၏ ၀ှီးချဲများကို မတင်နိုင်ရန်) မ̗ တင် ဓာတ်လှေကားများ ပါရှိရသည်။ ဒါဟာ လူ့အခွင့်ရေးကို တန်းတူပေးထားခြင်း သဘောဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဒုက္ခိတများ ဖြစ်ကြရသော လူများသည် ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်၏။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆင်းရဲသားများ များစွာရှိနေခြင်းအတွက် မအံ့သြမိပါ။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ ကောင်းမွန် ပါလျှက်နှင့် တောင်းစားနေသူတွေ၊ မိဘများ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါလျှက် လမ်းဆုံလမ်းခွများ၌ တောင်းစား နေရသော ကလေးသူငယ်တွေ၊ နိုင်ငံတော်မှ ဒုက္ခိတတွေအတွက် (နိုင်ငံတော်က ဆင်းရဲနေသေး၍) စောင့်ရှောက်မှု အထူးအစီ အစဉ်မရှိသေးသောကြောင့် လမ်းဆုံမီးပွိုင့်များ၌ တောင်းရမ်းစားသောက်နေရသော ဒုက္ခိတတွေ၊ ခွက်လက်ဆွဲ၍ တောင်းစားနေရသော ခိုကိုးရာမဲ့ ဖိုးအို၊ ဖွားအိုတွေ၊ ဒီမြင်ကွင်းတွေကို မကြာခဏဆိုသလို မြင်တွေ့နေရ၍ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါ၏။
ဤကဲ့သို့ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား မြင်ကွင်းတွေ မြင်နေရခြင်းအတွက် မည်သူ့ကို အပြစ်ဖို့၍၊ မည်သူ့ကို အပြစ်တင်မည်နည်း။ အဖြေကား မသဲကွဲပါ။ အစိုးရပေါ်လစီတစ်ခုတည်းကိုချည်း ဇောင်းပေး၍ အပြစ်တင်နေလို့ မရပါ။ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ နေသူအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အထူးစီမံကိန်းအနေနှင့် ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်း ပိုမိုရရှိနိုင်ရေးတို့အတွက် အလျှင်အမြန်ဆောင်ရွက်သင့်သောစီမံကိန်းမှာ ဆင်းရဲသားများ အလုပ်လုပ်ချင်လာ အောင် ပညာပေးရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လယ်ယာကုန်းမြေများ ပေါများလှ၍ ရုံးများ၊ စက်ရုံများ၊ အလုပ်ရုံများအပြင် စိုက်ပျိုးရေးခွင်များ၌ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အကျိုးခံစားခွင့်များ များများရရှိနိုင်ရန် (subsidize ပြုလုပ်လျှက်) အစိုးရမှ အနှစ်နာခံ၍ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသင့်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မွေးဖွားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံးအတွက် အထက်တန်းပညာအထိ မသင်မနေရ ပညာရေးမျိုးနှင့် အခမဲ့ ပညာရေးမျိုးဖြစ်အောင် နိုင်ငံတော်မှ အလျှင်အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးသင့်မည်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပညာရေးဘက်ချက်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ဆင်းရဲသားဦးရေများ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါးသွားနိုင်စေရန် (၁) အခွန်များကို ကုမ္ပဏီများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လုပ်သားပြည်သူများထံမှ သတ်မှတ် ချက် စံနှုန်းအတိုင်း စနစ်တကျကောက်ယူခြင်း၊ (၂) အခွန်ကောက်ယူရာ၌ သတ်မှတ်ထားသော အခွန်အခ များကို စနစ်တကျ ပေးသွင်းနိုင်ရန် အကျင့်ပျက်ချစား လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူ ပြုနေသော ၀န်ထမ်းများကို အရေး ယူ၍ ထိရောက်စွာ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ (၃) တိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိနေသော လုပ်သားပြည်သူများသည်လည်း မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အခွန်အခများကို စနစ်တကျ ပေးဆောင်ခြင်း (၄) မူးယစ်စေတတ်သော အသောက်အစားများ၊ လောင်းကစားများနှင့် အပျော်အပါးများကို မိသားစုဘ၀ သာယာပျော်ရွှင်နိုင်ရေးအတွက် အသိတရားနှင့် ကြိုးစား၍ ဝေးဝေးက ရှောင်ရှားခြင်း၊ (၅) စာသင်ချိန်များတွင် ကျောင်းစာသင်ခန်းများ၏ အပြင်သို့ ရောက်ရှိနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များက စနစ်တကျ စစ်ဆေးခြင်း၊ မိဘများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများကို ပြုလုပ်ခြင်း၊ တာဝန်မဲ့သော မိဘများကို အရေးယူခြင်း၊ လိုအပ်ပါက အပြစ်ပေးခြင်း၊ ဒဏ်တပ်ခြင်းမျိုးကို ပြုလုပ်ပေးရမည်။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်မှ စေတနာထား၍ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်တွင်း၌ ဆင်းရဲသားဦး ရေများ လျှော့နည်းပါးသွားနိုင်ကြောင်း အကြံပြုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခု တိုက်တွန်းလိုသောအချက်မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ဖြစ်သောအခါမျိုး၌ ̏တစ်ပ် (Tip) မန်းနီးပေးခြင်း̋ ဓလေ့များရှိသလို၊ အလှူရက်ရောသော မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံ၌ အလုပ်သမားများ၊ အောက်ချေလူတန်းစားများအား သူတို့၏ ရိုးသားသော လုပ်အား တန်းဖိုးကို အသိအမှတ် ပြုသည့်အနေအားဖြင့် တစ်ပ်မန်းနီးပေးခြင်းမျိုးကဲ့သို့ (တစ်ထောင်၊ နှစ်ထောင် စသည်မျိုး) “မေတ္တာဒါန̋ အသုံးအနှုန်းမျိုးဖြင့် တစ်ပ်မန်းနီးပေးခြင်းမျိုးကို မြန်မာတို့ရဲ့ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခု အနေမျိုး ဖြစ်လာအောင် နိုင်ငံတော်မှ (သို့မဟုတ်) စာပေနှင့် အနုပညာရှင်များမှ ၀ိုင်းဝန်း၍ “မေတ္တာဒါန̋ အစီအစဉ်မျိုး ဖြစ်မြောက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ထို“မေတ္တာဒါန̋ကို ပေးသူများ ကလည်း “မိအိုဖအို များအား ကျေးဇူးပြုပေးနေသော သားသမီး လိမ္မာများအား ကံကောင်းခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံပါစေ̋ ဟု စိတ်ထဲမှ ဆုမွန်များတောင်းလျှက် “မေတ္တာဒါန̋ ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနှင့် ပေးသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုကြမည်ဆိုလျှင် ထို“မေတ္တာဒါန̋ ပေးခြင်းဓလေ့သည် မြန်မာတို့၏ ဓလေ့တစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ များမကြာမီမှာ မြန်မာ ပြည်ရောက် နိုင်ငံခြားသားများပါ စိတ်ဝင်စားလာနိုင်ပြီး၊ ၀င်ငွေနည်းသော အလုပ်သမားများအား စာနာစိတ်ဖြင့် “မေတ္တာဒါန̋ ပေးခြင်းမျိုးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြောင်း ယုံကြည်မိပါသည်။
ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓနည်းကျအတိုင်း ပြောဆိုရသော် ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆင်းရဲခြင်းထက် အသိဥာဏ်ပညာ ဆင်းရဲခြင်းမျိုးက ပိုမို၍ ဆိုးဝါးကြောင်း အသိတရားများ ရှိကြစေလိုခြင်းပါ။ ရှေးမြန်မာမင်း များနှင့် ပြည်သူများသည် ပစ္စည်းရှိသူက ပစ္စည်မဲ့လူတန်းစားများကို ကူညီတဲ့အနေနှင့် အစားအသောက် အသုံး အဆောင်များကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသလို၊ ပညာရှိ ရဟန်းရှင်လူများကလည်း ပညာမဲ့သူ ရဟန်းရှင်လူများကို ပညာများကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြသည်။ အကယ်၍သာ ယနေ့မြန်မာ နိုင်ငံတော်သူ၊ နိုင်ငံ တော်သားများသည် တိုင်းပြည်အား သတ်မှတ်အခွန်ပေးဆောင်၍ ပြည်သူ၊ ပြည်သားများအား တတ်နိုင်သမျှ စီးပွားရေး၊ ပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်အောင် အကူညီများ ပေးကြမည်ဆိုလျှင် တစ်နေ့တခြား ဆင်းရဲသား ဦးရေသည် နည်းပါးလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ̏ရွှေသီးသော မြန်မာ့မြေကြီး̋ ပေါ်၌ နေထိုင်ကြသော မြန်မာ ပြည်သူ၊ ပြည်သားတို့၏ ဘ၀ကံကြမ္မာသည် တနေ့တခြား ကောင်းသည်ထက် ကောင်းလာမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်နိုင်ကြပါစေ။
2 Responses to ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (ITBMU) – မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆင်းရဲသားပြဿနာ
Catwoman on October 16, 2014 at 4:23 am
People who are singing or playing instruments might not be beggars. Sometimes they are just performing. They have jobs and homes
အရှင်ကုသလသာမိ (အတည်မဲ့) on October 16, 2014 at 4:50 pm
အဓိကအကြောင်းတရားက တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိလို့ဟု ကောက်ချက်ချမိပါတယ်ဘုရား။ ခက်တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ သဘောတရားကို လူတွေ နားလည်မှု နည်းပါးနေသေးတာပါပဲ။